तोकिएकै समयमा आयकर बुझाउन सरकारको ताकेता ! -
२८ पुस, काठमाडौं । सरकारले तोकिएकै समयमा आयकर बुझाउन करदातालाई ताकेता गरेको छ ।
कोरोना महामारीमा बीच व्यापार प्रभावित भएको भन्दै व्यवसायिक संघसंगठनले आयकर बुझाउने समय थप गर्न माग गरिरहेका थिए । तर, सरकारले भने आयकरको किस्ता बुझाउने समय पुस मसान्तसम्म अनिवार्य बुझाउन ताकेता गरेको हो ।
आयकर ऐन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आयकरको किस्ता रकम बुझाउने करदाताले कारोबारको अनुमानित करको विवरण र विवरणअनुसार बुझाउनु पर्ने पहिलो किस्ता वापतको ४० प्रतिशतले हुन आउने कर पुस मसान्त भित्रै बुझाउन आन्तरिक राजस्व विभागले सूचित गरेको छ ।
सुनको मुल्य घट्यो, कति छ त आजको बजार भाउ ?
अर्थ मन्त्रालयको विश्लेषण : अर्थतन्त्रमा कोभिडको प्रभाव घट्दैछ !